Papa's Freezeria To Go! 1.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Papa's Freezeria To Go!
Papa's Freezeria To Go! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Android ဖုန်းတွေမှာ reimagined ဂိမ်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ Papa ရဲ့ Freezeria ၏ဤအမှတ်တံဆိပ်-ဗားရှင်းသစ်နှင့်အတူသွားလာရင်းအပေါ်ဆွန်ဒါ Build ဝတ်ပြု!
သင်ရုံတစ် oceanfront ရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအပန်းဖြေနွေရာသီအလုပ်စတင်ခဲ့င့်, ဒါပေမယ့် Papa Louie ယ့်ဖောက်သည်များ၏အပေါငျးတို့သကျွန်းပေါ်တွင်ရောက်ရှိလာသည့်အခါအမှုအရာ hectic ရ! သငျသညျပွုမူဆကျဆံ, ရေခဲမုန်လောင်း mixables နှင့်ရည်ဖြည့်စွက်, ဆွန်ဒါရောစပ်, ကြာပွတ်မုန့်နှင့် toppings ထည့်အရသာရေခဲသေတ္တာဆွန်ဒါပွင့်ရိုက်ရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံနွေရာသီအဘို့အထိပ်ပေါ်မှာချယ်ရီမမေ့မလြော့ပါလိုပါလိမ့်မယ်!
သင်သည်သင်၏လက်၏စွန်ပလွံ့ညာဘက်ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသစ်ကိုထိန်းချုပ်မှုနဲ့အတူစားသောက်ဆိုင်များ၏အသီးအသီးသောဧရိယာအကြား multitask ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာစောင့်ဆိုင်းဖောက်သည်များအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အမိန့်ဘူတာမှ HEAD ။ အသီးအသီးအဘို့ဆွန်ဒါမုန့်နှင့်ရေခဲ mixables ပေါင်းစပ်ဖို့ Build ဘူတာသို့ပြောင်းပါ။ သူတို့ပဲညာဘက်ကို blended င့်သည့်တိုင်အောင်ဆွန်ဒါမွှေဖို့ရောနှောဘူတာမှဤနေရာသို့သွားရန်။ သင့်ရဲ့ဇီဇာဖောက်သည်များရန်ဆွန်ဒါအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်မီကနှင်တံမုန့်နှင့် toppings သွန်းလောင်းရန်ထိပ်တန်းဘူတာမှ Hop ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘူတာ, သင်သည်ပွတ်ဆွဲပြီးဆွဲယူဖို့လိုပါတယ်, နှင့်ဆွန်ဒါတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအားဖြင့်သင်တို့၏သွားရာလမ်းကိုအသာပုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာလက်တို့ကို-On အတွေ့အကြုံ, ဖြစ်ပါတယ်။
ရမှတ်များနှင့်အဆင့်အထိတက်ဝင်ငွေပျော်ရွှင်သင့်ဖောက်သည်ကိုစောင့်ရှောက်။ သင့်ရဲ့ level ကိုမြင့်တက်အဖြစ်, သင်ဆိုင်မှာအသစ် toppings unlock ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အသစ်ဖောက်သည် Freezeria သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်စတင်လိမျ့မညျ! တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလက်ရာဆွန်ဒါလည်းသင်ဧည့်ခန်းများအတွက်အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အလှဆင်အပေါ်ဖြုန်းနိုင်သည့်အကြံပေးချက်များ, ဝင်ငွေ!
Papa'S FREEZERIA သွား ** ** NEW
သင့်ရဲ့လက်ချောင်း action ကိုလမ်းမရကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့် Go To Papa ရဲ့ Freezeria, သေးငယ်တဲ့ screen များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့် reimagined ရှိ၏!
သင့်လက်မထိန်းချုပ်မောင်းနှင်မှုနဲ့အတူ - သင်တို့သည်သင်တို့၏လက်မဘို့ပြီးပြည့်စုံသောမျက်နှာပြင်ရဲ့ထောင့်၌ခလုတ်သုံးပြီးဘူတာ switch ပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်လည်းလျင်မြန်စွာအမိန့်လက်မှတ်တွေကိုပြောင်းမှထိပ်ဆုံးထောင့်၌ခလုတ်အသုံးပွုနိုငျနှငျ့သငျလွယ်ကူသောစာဖတ်ခြင်းများအတွက်ချဲ့-In mode မှာသင့်ရဲ့အမိန့်လက်မှတ်တွေလူအပေါင်းတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စခန်းတည်ဆောက်ရန် - သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူမာစတာများကဲ့သို့ရေခဲမုန့်နှင့် mixables သွန်းလောင်းနိုင်အောင်ကျနော်တို့လုံးဝသေးငယ် screen များအတွက် Build ဘူတာဒီဇိုင်းင့်! အဆိုပါသွန်းလောင်း Button လေးနှင့်အပိုဆုမီတာကိုသင်မီတာကိုစောင့်ကြည့်နှင့်သင်၏အမြင်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုလက်ချောင်းမပါဘဲလက်ျာအချိန်မှာကိုထိပုတ်ပါနိုင်အောင်, ဘေးထွက်မှပြောင်းရွေ့နှင့်သင့်လက်မ့ညာဘက်ကိုသုံးနိုင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး mixable သို့မဟုတ်တစ်ရည်ကိုရွေးချယ်ဖို့အချိန်မယ့်အခါသင်အလွယ်တကူမှန်ကန်သောကို item ကိုထိပုတ်ပါနိုင်အောင်, တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်ကြီးမားတဲ့ခလုတ်နှင့်ပြည့်စုံသည်။
MIX ဘူတာရုံ - ကျနော်တို့ရောနှောဘူတာအဆင့်မြှင့်တင်သေးငယ်တဲ့ touch screen ပေါ်မှာပင်ပိုကောင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ဒဏ်ငွေ-ညှိပါတယ်။ သင် Blend Alarm အဆင့်မြှင့်တင်ယ်ယူပြီးတာနဲ့, သင်တို့သည်ဤကြီးမားသော Alarm drag and ဆို Blender ပေါ်သို့ထိုသူတို့ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ booster့Buttons လည်းကြီးမားနှိပ်ဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ပင်တစ်ချိန်ကမှာမျိုးစုံ Blender မြှင့်တင်ရန် Multi-touch အသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်သည်!
TOP တိ​​ု့ဘူတာရုံ - ကျွန်တော်တို့ဟာ "Go To Papa ရဲ့ Burgeria!" တို့မှ Topping Bin ကို carousel ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့အမှတ်တံဆိပ်-နည်းလမ်းသစ်၌သင်တို့ကိုထိပ်တန်းဆွန်ဒါပေးနိုင်ပါတယ်ပေးသော! ဆွန်ဒါဖြတ်ပြီးကျက် toppings လောင်းဖွင့်ဖို့ဆွန်ဒါသောက်သောခွက်ကိုဖမ်းပြီးထို့နောက်သင်အသုံးပြုလိုသောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ဖို့ Topping Bins ၏ carousel ပွတ်ဆွဲပါ။ သင်သည်လည်းချယ်ရီနှင့် cookies တွေကိုနှင့်တူ placeable ပစ္စည်းများမှ switch တစ်ခု button ကိုနှိပ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျအချိန်မပြီးစီးသောသူတို့အားဆွန်ဒါရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့နှင့်အပြည့်အဝ Multi-touch ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ, သင်အောက်တွင်ထိုဖလားကိုရက်နေ့တွင် bins နှင့်အခြားစေးထွက်ရှိလျှောတယောက်ကိုလက်ညှိုးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်သည်!
NEW ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းကစားရသကဲ့သို့သင်တို့ကို unlock ပါတယ် mixables, ရည်, ကြာပွတ်မုန့်အရသာများနှင့်အခြား toppings အပါအဝင်ဂိမ်းရဲ့ဂန္ထဝင်သို့မဟုတ် HD ကိုဗားရှင်းမတှေ့နိုငျသောသစ်ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တစ်တန်ထည့် ။ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘို့အ 70 ကျော်အတွက်ထူးခြားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအဲဒီမှာပဲ!
** GAME ဟု ** အင်္ဂါရပ်များ
- လက်ကမ်းပေါ်တွင် Papa Louie ဝဠာတှငျရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်
- သေးငယ်တဲ့ screen များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဂိမ်း
- Multi-အလုပ်တခုကိုအကြား, တည်ဆောက်ခြင်းရောစပ်နှင့် topping
- သင့်အတွက်ဂိမ်းအကြံပေးချက်များကို အသုံးပြု. အဆင့်မြှင့်ဝယ်ဖို့ပစ္စည်းဆိုင်
- အသက် 85 ဖောက်သည်များမူထူးခြားတဲ့အမိန့်နှင့်အတူ unlock လုပ်ဖို့
- In-ဂိမ်းအောင်မြင်မှုများ 120 ဝင်ငွေ
Tablet ကိုအသုံးပြုသူများအတွက် ** မှတ်ချက် **
Go To Papa ရဲ့ Freezeria အထူးသဖြင့်သေးငယ်တဲ့ screen များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်ကြီးမား-screen ကိုဂိမ်းရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, တက်ဘလက်များအတွက် "Papa ရဲ့ Freezeria HD ကို" ထွက်စစ်ဆေး!
Papa's Freezeria To Go! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Papa's Freezeria To Go! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Papa's Freezeria To Go! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
tmc123 စတိုး434k
Papa's Freezeria To Go! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Papa's Freezeria To Go! အခ်က္အလက္
Papa's Freezeria To Go! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ